Tamin'ny taona 1980, firenena maro eto amin'izao tontolo izao no nanomboka nametraka piraofilina vy tamin'ny rafitry ny tilikambo rehefa namorona tsipika fandefasana UHV. Tilikambo fantsom-by vy misy fantsom-by toy ny fitaovana lehibe niseho. Any Japon, ny tilikambo fantsom-by dia saika ampiasaina amin'ny tsipika sy tilikambo 1000kV UHV. Izy ireo dia manana fikarohana lalina momba ny teknolojia famolavolana vy fantsom-by.
Manaraka ny traikefa avy any ivelany, ny mombamomba ny fantsom-by dia nampiasaina tao amin'ny 500kV Double Circuit Tower sy tilikambo efatra amin'ny tilikambo iray ihany any Shina, izay mampiseho ny fahombiazany sy ny tombony azo. Noho ny hamafin'ny fizarana lehibe, ny toetra mampiavaka ny fihenan-tsasatra, ny fihenjanana tsotra, ny endrika tsara tarehy ary ny tombony miavaka hafa, ny firafitry ny tilikambo fantsom-by dia novolavolaina tsara tamin'ny tsipika hafainganam-pandrefesana samihafa. Indrindra, izy io dia be mpampiasa amin'ny firafitra goavambe sy ny firafitry ny tilikambo misy ny angovo an-tanàn-dehibe.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny metallurgical ao Shina dia tsy sarotra intsony ny famokarana vy mahery. Ny kalitaon'ny vy mirafitra matanjaka be ao Shina dia nohatsaraina haingana sy tsy miova, ary ny fantsom-pamokarana dia nanjary malama kokoa, izay manome ny fahafaha-mampiasa vy matanjaka amin'ny tilikambo fampitana. Ao amin'ny tetik'asa fikarohana savaranonando ny zotra fampitana 750 kV, ny Ivotoerana fikarohana momba ny fanamafisam-pahefana elektrika an'ny orinasam-panjakana dia nandalina ny firafitry ny fifandraisana, ny lanjan'ny mari-pahaizana momba ny famolavolana, ny bolt ary ny tombontsoa ara-toekarena hihaona amin'ny fampiasana vy mahery. . Heverina fa ny vy mahery dia nihaona tanteraka tamin'ny fepetra ampiasaina amin'ny tilikambo avy amin'ny teknolojia sy ny fampiharana, ary ny fihenan'ny vy mahery dia azo ahena Ny lanjan'ny tilikambo dia 10% - 20%.
Previous: Tilikambo rivotra tsara kalitao 2018 - Tilikambo vy misy jiro elektrika - Qiangli
Rafitra vy amin'ny Tube, Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Tilikambo vy anggoro elektrika, Firafitra Steel Prefab, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Tilikambo famindrana angovo vy,